Sajhasabal.com | Homeबोइलरले दाँत माझेर बियरले कुल्ला नगरौं
पूर्ण प्रसाद न्यौपाने (ओखलढुंगा) | दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदै छ । वर्षौंदेखि स्थानीयहरुले आफूले चाहेको नेता पाएका छैनन् । करिब बीस वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने भएपछि देश तथा विदेशबाट मतदान गर्न आफ्नो जन्मथलो फर्कनेको दिनप्रतिदिन लहर लाग्ने गरेको छ ।
ओखलढुंगामा पनि चुनावी चर्चा परिचर्चा पनि उत्तिकै छ । चिया पसल देखि दलका पार्टी कार्यालयहरुमा चुनाव कसरी जित्ने भन्ने नेता तथा कार्यकर्ताको बहस चल्दै छ । पार्टीले पनि आआफ्ना उम्मेदवारहरु घोषणा गर्दैछन् । कोही उम्मेदवार बन्नलाई आफ्नो पेसा नै राजीनामा दिएर मैदानमा उत्रिसकेका छन् । त कुनै आफ्नो व्यवसाय नै ठप्प राखेर मैदानमा छन् । कुन गाउँपालिका वा नगरपालिकामा कसले कति पैसा खर्च गरेर चुनाव जित्ने भन्ने विषयमा मात्र बढी बहस भएको सुनिन्छ ।
हामी ‘नोट दिन्छौँ भोट लिन्छौँ’ भन्ने नेता कार्यकर्ता पनि थुप्रै देखिन्छन् । कतिपय त ‘एनी हाउ चुनाव जिताऊ’ भनेर व्यक्तिगत रुपमा पार्टीको प्रचारमा लागेका छन् । तिनीहरुको काम, कसरी मतदाताहरुलाई घुस खुवाएर आफ्नो पक्षका बनाउन सक्ने भनेर प्रचारमा छन् ।
अचम्मको कुरा त ‘यसलाई यति रुपियाँ दिए भइहाल्छ’ भनेर बार्गेनिङ गर्नेहरु पनि देखिन थाले । आर्थीक अवस्था कमजोर भएका समुदायका लागि यतिबेला नेताहरुले पैसामा भोट किन्ने तयारी गरिरहेका छन् । के यसरी पैसाले मतदाताहरु किन्नेले भोलि समाजको विकास गर्ला ?
उम्मेदवारले मतदाता नामावली खरिद, सवारी साधन र घोडा,सवारी इन्धन र दाना, प्रचारप्रसार सामग्री, ढुवानी, कार्यकर्ता परिचालन, कार्यालय सञ्चालन लगायतमा खर्च गर्नका लागि मात्र भनिएको छ । तर ओखलढुंगामा त सामान्य वडा तथा नगरपालिकामा नै ३०/३५ लाख खर्च नगर्दा चुनाव जितिन्न भनेर त्यो तयारीमा छन् । यसरी तोकिएको रकम उल्लङ्घन गर्दै करिब पाँच चौथाइ बढी खर्च गरेर चुनाव जित्न खोज्नु पक्कै पनि जनता तथा समाजका लागि घात हुनु हो ।
चुनावमा आफ्नो मतको पैसा दिने र पैसा खाने भनेकै राज्यका शत्रु जस्तै हुन् भन्छन् जानकारहरु । यसमा मदाताहरुले सजग हुनु जरुरी छ । यो अवधिमा सबैभन्दा ठूला भनेका मतदाता हुन् । मतदाताले जसलाई चुनावमा मतदान गर्यो, त्यो भोलिको नेतृत्व गर्ने नेता हो । जसलाई मतदाताले मत दिएर बनाएको हुन्छ । त्यो नेतालाई नेतृत्वमा पुर्याउनका लागि विभिन्न समुदायका दाजुभाइ सहयोग गरेर बनाएका हुन्छन् । सहयोग गर्नेले पनि कुन आधारमा सहयोग गरेका छन् ? आफ्नो मत पैसामा बेचेर कि हाम्रोभन्दा राम्रोलाई जिताऊँ भन्ने अभियानमा लागेर निःस्वार्थ सहयोग गरेका छन् । त्यो नेतृत्वकर्ताले बुझ्नुपर्छ । विकासका लागि राम्रोलाई निःशुल्क मतदान गर्नुपर्छ ।
नेताहरुले त आफू नेतृत्व गर्नका लागि गद्दारी काम गर्छन् । चुनावमा जाँदा विभिन्न आश्वासन दिन्छन्, पैसा बाँड्छन्, कपडा बाँड्छन, आशा देखाउँछन् अनि चुनाव जित्छन् । लालचमा लागेर मतदान गर्दा भोलि जनताले कुरा गर्ने बाटो नै हुदैन । त्यसैले मतदाताले पैसाको लालचमा बिक्नु उपयुक्त छैन । हामीले कस्तो नेतालाई मतदान गर्ने ? त्यो बुझ्नु जरुरी छ । कुन नेताले गर्दा समाजलाई फाइदा भएको छ ? को नेताले समाजलाई माया गर्छ, विकासका काममा चिन्ता गर्छ ? कुन नेताले गर्दा देश तथा समाजलाई घात भइरहेको छ, त्यो राम्ररी बुझेर राम्रोलाई निःशुल्क मतदान गर्ने हो भने खेर जाँदैन । त्यो नेताले पनि निःस्वार्थ देशको सेवा गर्छ । अनि हामी विकासको गतिमा लम्किन्छौँ ।
विगतमा पनि कति नेताहरुले चुनावको बेला कपडा बाँडे तर चिसो हटाउने जुक्ति बाँडेनन् । पैसा बाँडे तर पैसा कमाउन सिकाएन । यसरी विभिन्न सामान बाँडेर क्षणिक रुपमा फाइदा देखिने तर लगत्तै घात हुने काम गरेको हामीलाई अवगत नै छ ।
यो संविधानसभाको निर्वाचन होइन । यो स्थानीय तहको निर्वाचन हो । त्यसैले कोही पत्रकार, कोही नेता,शिक्षक, कोही ब्यापारी, कोही सर्वसाधारण आउँदैछन्, गाउँगाउँमा भोट माग्नलाई । तिनीहरु को हुन त ? कस्तो खाले हुन् ? हिजोको दिनसम्म तिनीहरुले के कस्ता काम गरेका थिए ? समाज तथा देशलाई टेवा पुग्ने गरी ? मतदाताहरुले अध्ययन गर्नु जरुरी छ । भोलि आफूले दिएको मत खेर नजाओस् । पैसाको लालचमा नलाग्ने हो भने भोलि नेताहरु पनि आफैं सुूिनेछन् । चुनावको बेला मत आफ्ना पक्षमा पार्नका लागि बाँड्ने सामान पनि खाने मतदाता नपाएमा पछि तिनै नेताहरु बाँड्न आउने छन् योजना ल्याएर ।
चुनावमा हामीले किनबेच गरेको मत त्यसै दिन टुङ्गिछ । नेता र मतदाताका सम्बन्ध पनि त्यसैदिन टुङ्गिन्छ ।
जसरी हामी पसलमा सामान किन्छौँ । त्यसैले हामीलाई लामो समयसम्म सम्बन्ध बलियो बनाउनका लागि लालचमा नफस्नु राम्रो हुन्छ । साथै समाजका सर्वसाधारण जनताहरुलाई यो विषयमा चेतना फैलाउनु जरुरी छ । अहिले जानकारी गराउने समय प्रशस्तै छ । पछि गएर पस्ताउनु नपरोस् ।
भ्रष्टाचारी, इज्जतको ख्याल नगर्ने, बेइमानीसँग मिलेर आफ्नो भोटको बार्गे्निङ गर्ने हो भने हामीले कहिल्यै न्याय पाउदैनौँ । काम गरेर खाने मजदुर दाजुभाइको पसिनाको मूल्य कहिल्यै पाइर्दैन् । पीडितहरुले थप पीडा भोग्नुपर्छ । पीडकहरू झन् हौसलामा उत्रन्छन् । फेरि लाचारहरु सत्तामा टिक्नका लागि देशका कुना कन्दरा नै बेच्छन् । त्यसैले पैसाको पछाडि होइन राम्रो र सक्षम नेतृत्व गर्ने भोलि सबैका आवाजलाई समावेस गर्न सक्ने नेतालाई मतदान गर्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो ।
त्यसैले म अनुरोध गर्छु : मतदाताहरुले पनि बोइलरले दाँत माझेर बियरले दाँत माझ्न नखोजाँै । र उमेद्वारहरुले पनि मतदाता किन्ने होईन,विकास र परिवर्तनका लागि मिसन र भिजन तय गर्नुस् । चुनाव जित्नुस् विकासमा लाग्नुस् सबैलाई अग्रिम शुभकामना ।